Vaovao - Arenti manendry an'i Topica LLC ho mpaninjara eo an-toerana ao Mongolia
Arenti manendry an'i Topica LLC ho mpaninjara eo an-toerana ao Mongolia
Hangzhou - 9 martsa 2021 - Arenti, mpanolotra fakan-tsarimihetsika fiarovana an-trano IoT malaza, androany dia nanambara fa manamafy ny fisiany any Mongolia izy miaraka amin'ny mpiara-miasa Topica LLC vaovao ho mpizara ho an'ny seha-pamokarana andiany iray manontolo.
Ny fiaraha-miasa vaovao dia manitatra ny fampandrosoana ny orinasa Arenti any amin'ny fantsom-pivarotana mpanjifany any Mongolia.
Topica no mpizara lozisialy fiarovana vokatra Mongolia manana traikefa 20 taona bebe kokoa amin'ity sehatra ity. Tselmeg, Tale mpitantana ny Topica, dia nilaza fa, "Taorian'ny fitsapana ny santionan'ny fakantsary Arenti, faly izahay nahita fa tsara ny valin'ny fitiliana ary mifaninana tokoa ny vidiny, ka nanapa-kevitra ny hampiditra ny vokatra Arenti andian-tsarimihetsika manontolo amin'ny portfolio izahay amin'ity volana ity . Voatendry ho mpizara mivantana sy mpanafatra fakantsary fakantsary manontolo an'i Arenti izahay nanomboka ny 9 martsa 2021. Tena reharehanay ny fiaraha-miasa amin'ity mpilalao manerantany ity ary matoky tanteraka ny vahaolana azonay omena miaraka amin'i Arenti. ”
Ny fiaraha-miasa mivantana amin'ny Topica dia hampiharina manomboka amin'ny 9 martsa 2021.
Arenti Technology dia vondrona AIoT mitarika mifantoka amin'ny fitondrana vokatra azo antoka sy mora kokoa ary azo antoka ho an'ny mpampiasa manerantany. Teraka tany Pays-Bas, Arenti dia natsangan'ny andiana manam-pahaizana avy amin'ny sehatra samihafa, anisan'izany ny orinasa fiarovana lehibe indrindra manerantany, ireo orinasa 500 manerantany, ary ny sehatry ny tranony manan-tsaina manerantany. Ny ekipa Arenti core dia manana traikefa 30 taona mahery any AIoT, fiarovana ary indostrian'ny trano an-trano. Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho azafady:www.arenti.com.
Momba ny Topica LLC
Topica LLC dia natsangana tamin'ny taona 2005 avy amina vondrona injenieran'ny teknolojia Elektronika sy Fampahalalana manana traikefa matihanina 20 taona. Manolotra serivisy maro karazana izahay toy ny serasera fampitam-baovao sy ny fampitaovana automatique indostrialy mifandraika amin'ny famatsiana vokatra, ny consultancy, ny fiofanana ara-teknika sy ny fanohanana, ny serivisy aorinan'ny varotra, ny fampidirana ny rafitra, ny fametrahana ary ny serivisy momba ny vaomiera.
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady: http://topica.mn.